श्रमिकको शब प्याक भएर आएको बक्स पनि लिलामीमा राख सरकार « Sansar News
२४ माघ २०७५, बिहीबार ०९:२६
दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार जो श्रमिकमुखी रहेको भन्न पछि पर्दैन । तर, तिनै श्रमिकले ल्याएको झिटि गुन्टा एयरपोर्टमा खोसेर अहिले लिलामीमा राखेको छ ।
बिदेशमा जुनसुकै कामका लागि गएका भए पनि धेरै त कुशल शिक्षित अनि दक्ष जनशक्ति हुन् । यसमा दुईमत छैन नेपालमा सिमित रोजगारी, सिमित श्रोत र साधनमा रमाउन नसकेर आफ्नो र आफ्नो परिवार, देशको लागी केही गरेर सम्बृद्द बनौ र बनाऊ भन्ने ऊद्धेश्य बोकेर बाध्यतावश बिदेश पलाएन भएका हुन् ।
श्रमिकको शब बोकेको रातो कफिन (बाकस)मा तपाइको आँखा किन गएन महोदय ? बिदेशबाट आऊने कफिन रातो बाकस पनी यसरी नै जफत गरेर यही परिश्रामिकको समान सरह लिलाम बिक्रीको लागी बोलपत्र आवहान गर सरकार !
हाल मकाउ चीन